काठमाडौं गएका श्रीमानको फोन उठाउँदा उड्यो श्रीमतीको होस…. – PathivaraOnline
Home > समाचार > काठमाडौं गएका श्रीमानको फोन उठाउँदा उड्यो श्रीमतीको होस….
काठमाडौं। कामको सिलसिलामा काठमाडौं गएका एक व्यापारीको फोनबाट उनकी श्रीमतीलाई फोन आयो । तर, फोनमा उनका श्रीमान् होइन अर्कै मान्छे बोलिरहेका थिए । ती व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँको माग गरेपछि श्रीमतीको होसहवास उड्यो ।भारतको उज्जैनबाट ती व्यापारी व्यापारको सिलसिलामा काठमाडौं आएका थिए । तर यही क्रममा उनको अपहरण भएको थियो । डराएकी श्रीमतीले अपहरणकारीले मागेको
रकम उसले बताएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिइन र प्रहरीकहाँ गइन् । पैसा पाएपछि व्यापारी छुटे । छुटेपछि उनले आफूलाई ४ दिनसम्म बन्धक बनाएर राखिएको र निकै कुटपिट गरेको बताए । प्रहरीले षड्यन्त्र रच्ने ती व्यापारीका परिचित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।
खातामा पैसा आएपछि अपहरणकारहिरुले पावेशलाई छोडिदिए । त्यहाँबाट छुटेपछि उनी दिल्ली पुगे र आरतीलाई फोन गरे । सूचना पाएपछि उज्जैन प्रहरी आरतीसँगै दिल्ली पुग्यो र पावेशलाई लिएर उज्जैन गयो । पछि अनुसन्धानका क्रममा पश्चिम बंगालका तिनै व्यापारी सुरजित सिंह मण्डलले नै षड्यन्त्र रचेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई कलकत्ताबाट पक्राउ गरेको छ । नेपाली अपहरणकारीहरुलाई पक्राउ गर्न नेपाल आउने तयारी भइरहेको उज्जैन प्रहरीले जनाएको छ । dcnepaal
यी अभागी बाबु जसले २ बर्षीय जीऊदो छोरीको लागि खाल्डो खनेर राखे, यस्तो छ चकित पार्ने रहस्य…
बुटवलकि अनिताको मृ;त्यु हुनको कारण…